Seeraar: “Jubbaland waxay u baahantahay qof aniga oo kale ah” | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Seeraar: “Jubbaland waxay u baahantahay qof aniga oo kale ah”
Seeraar: “Jubbaland waxay u baahantahay qof aniga oo kale ah”
Cabdinaasir Seeraar Maax ayaa manta sheegay in isaga loo “doortay madaxweynaha maamulka Jubbaland.”
Seeraar wuxuu ka mid ahaa musharrixiintii mucaaradka ee isku magacaabay “isbedel doonka” kuwaas oo hadda u muuqdo in ay kala jabeen.
“Waxay u bahan tahay qof anigoo kale ah oo badbaadiya Jubbaland. Waxaan u arkay in marxaladdas ay maanta taagan tahay”, ayuu yiri Seeraar oo la hadlay BBC Somali.
Wuxuu intaa ku daray: “Waxaa igu dhaliyay in isbedel caafimaad qaba ay Jubbaland hesho, waana rajeynayaa in maanta ay heshay”.
Cabdirashiid Xidig oo isku koox ay ahaayeen Seeraar ayaa shalay sheegay in isaga loo doortay xilka madaxweynaha Jubbaland uuna “yahay midka sharciga ah”.
Musharrixiinta qaar ayaa dhaliilay hannaanka lagu soo xulay baarlamaankii shalay doortay Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe).
Balse Seeraar wuxuu sheegayaa in iyagu aysan “fowdo u socon”, wuxuuna intaa ku daray “in markii hore aysan u socon doorashooyiinka la kala sheegtay, balse ay noqotay mid lagam maarman ah”, Wuxuu ka hadlayay madaxtinimada uu sheegtay Cabdirashiid Xidig.
“Xalku wuxuu ku iman doonaa sida umadda Jubbaland isla qaadato. Anigu kuma lihi in qof kasta meel istaago madaxweynaan ah, runtii ma ahan wax xal lagu gaarayo, laakiin wax kasta wuxuu leeyahay meel uu ka qaldamo,” ayuu yiri.
Cabdirashiid Xidig oo sidoo kale ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya aya dhankiisa shalay BBC Somali u sheegay: “Aniga ayaa madaxweyne ka ah Jubbaland waxaana la ii doortay si sharci ah” ayuu yiri Cabdirashiid Xidig oo la hadlayay BBC.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhankeeda ka soo horjeesatay hannaanka doorashada, waxayna tilmaamtay in aysan aqoonsaneyn natiijo kaste oo ka soo baxda.
War saxaafadeed shalay ay soo saartay wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda aysan “aqoonsanayn is-caleemo saarada ka dhacay magaalada Kismaayo”.
Previous articleWaalid loo xukumay in ay gabadhooda ka ilaaliyeen cunto dheelitiran
Next articleXOG:Fahad Yasiin oo MD Farmaajo ka diiday arin mar waliba isweydiyaan shacabka iyo siyaasihiinta mucaaradka
XOG: Duulimaadyada Dalka Oo Isbuucaan Dib Loo Furi doono+Amar Daba Socda
SAWIRO: Ciidamo Diyaarad looga daad-gureyay Magaalada Muqdisho & halka la geeyay
“Iiraan ma aha Somalia oo kale oo waxaa iska leh dad qab iyo hidde leh!”
SAWIRRO: Wasiir Bayle oo shir muhiim ah kaga qayb galaya Adis ababa sheegayna in uu wado..
Sawirro:Dowladda Somalia oo soo bandhigtay qandaraas lacag badan lagu heli karo
DAAWO: Haweeney 25-jir ah oo mar qura dhashay 7-carruur ah+( LA YAABKA ADUUNKA)
DURUUS laga baran karo fashilka Talyaaniga iyo Spain ee cudurka COVID-19
John Cena oo soo bandhigay sawir lala yaabay oo ku saabsan Atariisho Hindi ah